Maca အကျိုးခံစားခွင့်များ - HelpMEHemp
maca ပီရူးမှမွေးဖွားသောအပင်ဖြစ်သည် (သိပ္ပံနည်းကျနာမည် - Lepidiumလှိုင်) အင်ဒီးစ်တောင်တန်းများမြင့်မားသောကုန်းပြင်မြင့်များတွင်ကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံအဖြစ်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကြာစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ဆေးပညာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်မုန်လာဥနှင့်ဆက်စပ်သည်။
maca ပီရူးချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးများသောအရာဖြစ်သည်။ အပင်၏အဓိကစားသုံးနိုင်သောအပိုင်းမှာအမြစ်များဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်အခြောက်နှင့်အမှုန့်ပုံစံတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအမှုန့်ပုံစံဖြင့် စား၍ အစားအစာထဲသို့ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်များတွင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုမုန့်ဖုတ်။ ဖြစ်စေ၊ ကင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဟင်းချိုအဖြစ်ပြင်ဆင်သည် maca chicha.
ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုမှုများအပြင် maca ထို့အပြင်မကြာသေးမီကသုတေသနလေ့လာမှုများ၌ကြီးသောဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောပြသခဲ့သည်။ သုတေသနသည်၎င်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ နို့စို့အရွယ်၌ရှိသော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြမည် maca အောက်ကစက်ရုံ။
လျော့နည်းသွားသောလိင်ဆန္ဒသည်ယနေ့ခေတ်လူကြီးများအတွက်ဘုံပြcommonနာဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် libido ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အပင်များနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။
၏လူသိအများဆုံးအကျိုးကျေးဇူး maca အမြစ်သည်လိင်စိတ်တိုးပွားစေရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများကြောင်းအပြုသဘောရလဒ်များကိုပြသခဲ့ကြသည် macaရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် libido အမြစ်တိုးပွားလာသည်၊ macaလိင်စိတ်နိုးထစဉ်တွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊
သိပ္ပံပညာကမတောင်းဆိုမီအပိုဆောင်းသုတေသနလိုအပ်နေစဉ် maca libido တိုးပွားလာသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပဏာမအစီရင်ခံစာများသည်အလွန်အလားအလာရှိသည်။
2. Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ယောက်ျားမွေးဖွားခြင်းကိုတိုးပွားစေပါသည်
maca erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ခံစားနေရပြီးလူတွေကိုအမြစ်ကကူညီနိုင်တယ်။ သုတေသနကသေးငယ်တဲ့ပမာဏကိုစားသုံးကြောင်းပြသခဲ့သည် maca နေ့စဉ်နှင့်အမျှသူတို့၏ယေဘူယျနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကိုပါ ၀ င်သည့်အမြင်များကိုအခြေခံသည်။
ဒါ့အပြင်မကြာသေးမီကသုတေသနကြောင်းပြသခဲ့သည် maca အမြစ်သည်မျိုးပွားခြင်းနှင့်မျိုးမပွားနိုင်သည့်အမျိုးသားများအတွက်သုတ်ရည်အရည်အသွေးကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
maca သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သုက်ပိုးအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, maca အထီးမွေးဖွားတိုးမြှင့်ဘို့ကတိပေးသည်။
မီးယပ်သွေးဆုံးသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရာသီလာခြင်းကိုအမြဲတစေရပ်တန့်စေသောအဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အီစထရိုဂျင်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူမနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
maca အီစရိုဂျင်အဆင့်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကတိပေးသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း perimenopause နှင့်သွေးဆုံးအဆင့်များ၌အီစထိုဂျင်ပမာဏသည်အတက်အကျအမျိုးမျိုးရှိပြီးရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ maca စိတ်ဖိစီးမှုပြောင်းလဲခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းပြ,နာများ၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်းနှင့်ညဘက်ချွေးထွက်ခြင်းစသည့်ဤသက်ရောက်မှုများကိုတန်ပြန်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
maca သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ တကယ်တော့, maca အစဉ်အလာကိုပီရူးမှဒေသခံများကကျောင်းတွင်ကလေးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ လေ့လာမှုများမှာအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းသက်သေသာဓကကဖော်ပြသည် maca ဤအသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်လာသည်။ နှင့်သုတေသီများကြောင်းအကြံပြုကြပါပြီ macaဤဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
maca သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတိုးတက်စေပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ flavonoids တွေပါ ၀ င်တယ်။ သုတေသန၏အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် macaစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ခံစားချက်များကိုလျှော့ချ။
မကာအမြစ်အမှုန့် အလွန်အာဟာရဓာတ်များစွာရှိပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများစွာ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဗီတာမင်စီ၊ ကြေးနီနှင့်သံတို့ပါဝင်သည်။
maca လူ့စားသုံးမှုမှတဆင့်အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လိင်ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးမှန်ကန်သည်။ အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များနီးပါးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် macaလူတွေကစမ်းကြည့်နိုင်တယ် maca မည်သည့်ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ။